Sacdiyo Xassan Maxamed | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Waa qoraa ka tirsan Afrikaan. Waa qoraa wax ka qorta arrimaha waxbarashadda, qoysaska, jaceylka, garab siinta dadka dhibaateysan iyo maamulka iyo maareynta. Waa qoraa aqoon gaar ah u leh maamulka iyo maareynta, sidoo kale waa maclimad wax ka dhigta mid kamid ah jaamacadaha dalka ku yaala.
Sacdiyo Xassan Maxamed, June 5, 2018
Jacaylku waa dareen ku abuurma qofka bini aadamka, dareenkaas oo u qaadayo ruux kale waxa uuna wax ka badalaa noloshiisa ayadoo kusoo kordhaysa is badal aad u ballaaran. Is badalkaas waxa uu noqon karaa mid farxadeed ama mid murugo hadba marxaladda uu qofka ku sugan yahay. Jacaylku waxa uu ku barayaa nolosha waxa ay tahay adigoo cashar aad ka qaadanayso markuu kusoo wajaho. Waa dareen aan la xakamayn karin kaasoo ku fida dhammaan xubmnaha jirka ayadoo ay xanuunsanayaan xubnahaasi qofkana uu ka lumayo fir fircoonidii lagu yaqaanay. Waxa uu kuu diidayaa cunnada, cabida, hurdada, dhex galka bulshada iwm intaas …
Maamul ‘’Maammul ” macnaheedu waa: habka go’aan sameynta iyo geedi socodka go’aannada la hirgeliyay (ama aan la fulin). Maammul waxaa loo isticmaali karaa qeybo badan sida: maamul hay’adeed, maamul caalami ah, maamul qaran, iyo maamul maxalli ah. Maadaama maamulku yahay geeddi-socodka go’aan qaadashada iyo geeddi-socodka go’aannada la fulinaayo, falanqaynta maammulka ayaa diiradda saaraya jaangooyooyinka rasmiga ah iyo kuwa aan rasmiga aheyn ee ku lug leh go’aan qaadashada iyo hirgalinta go’aammada la sameeyay iyo qaab-dhismeedka rasmiga ah iyo kan aan rasmiga aheyn ee la dejiyey si loo gaaro oo loo meelmariyo go’aanka. Xukuumaddu waa mid ka mid ah jilayaasha …
Xiriirka Ka Dheexeeya Aabaha Iyo Ubadka
Sacdiyo Xassan Maxamed, May 27, 2018
Guud ahaan markii aynu ka hadleyno arrimaha qoyska, qoysku waxa uu ka kooban yahay Aabe, hooyo iyo carruurtooda waa halka ugu yar aan kasoo qabannay tirrada uu ka kooban yahay qoys. Waa uu kasii badan karaa hadba inta uu la egyahay. Maqaalkaan waxaan diiradda ku saari doonnaa ‘’ xiriirka ka dhexeeya aabaha iyo ubadka’’. Aabuhu waa lafdhabarka reerka, masuulka reerka iyo hogaanka qoyska waxaana uu qayb laxaadleh ka qaataa barbaarinta ubadkiisa iyo daryeelka xaaskiisa, Waxa looga baahan yahay Aabaha in uu caruurtiisa saxiib la noqdo markasta oo uu ka war hayo xaaladkasta oo la soo darista maxaa yeelay waxaa …